Bazhov imisebenzi izingane. Yini isebenza ebhaliwe Bazhov?
Bazhov usebenza izingane. Yini isebenza ebhaliwe Bazhov?
Qamba uPawulu Petrovich Bazhov eyaziwa zonke omdala. Ngesikhathi ngegama umlobi Russian ezingqondweni zethu kukhona indaba emangalisayo yokuqala ibhokisi Malachite, Stone Imbali, bekhuthele futhi uhlobo yabavukuzi Ural futhi ngezisebenzi. Imisebenzi Bazhov waya ezweni Ural Imayini nombuso komhlaba nabajwayelene izakhamuzi zakhona imilingo: uyiNkosikazi Copper Mountain, Ognevushka-Poskakushkoy, elihlukanisa inselo Isiliva, umgijimi omkhulu futhi inyoka eluhlaza.
PP Bazhov - Master Ural yezinganekwane
Paul Bazhov wazalwa esifundeni esise-Ural ngo-1879. Umndeni wakhe bahamba eziningi, futhi oluningi lwalolo lokho okuzwakele esemncane futhi kubonakala mfana Sysert, Polevskoy, Seversky, Upper Sysert, kwakheka isisekelo zamaqhawe akhe mayelana esise-Ural, ukuphila kwakhe. Paul Bazhov njalo bakhangwa temdzabu.
Anakho inhlonipho enkulu emlandweni wabantu bakhe, aye emsebenzini wakhe wasekuqaleni uhlamvu nencazelo. Umlobi njalo eqoqwe futhi olusha amarekhodi temdzabu okusekelwe kuyo ukudala indaba zazo ezihlukile. Amaqhawe imisebenzi yakhe mikhulu kangakanani abasebenzi abavamile.
Khombisa zezenzakalo ezingokomlando ku yezinganekwane Bazhov
Serfdom yayikhona Urals kuze kube sekupheleni kwekhulu XIX. Works of PP Bazhov ukuchaza isikhathi lapho abantu babephila ngaphansi kwejoka lamakhosi azo. abanikazi Factory ekuphishekeleni imali akazange kubonise intengo ukuphila kwabantu kanye nethuba impilo ezigcemeni zabo, baphoqelelwa ukuba basebenze ezimayini emnyama futhi manzi kusukela ekuseni lize liyoshona.
Naphezu ezikhathini ezinzima, futhi umsebenzi onzima, abantu qinani idolo. Phakathi lezi zisebenzi zazivela lokudala kakhulu, abantu abahlakaniphile abakwaziyo ukusebenza kanjani futhi ulwazi olujulile izwe lobuhle. Incazelo uhlamvu yabo, ukuphila kanye nezifiso ezingokomoya aqukethe imikhiqizo Bazhov. Zibhaleni phansi enkulu ngokwanele. likhushulwe uPawulu Bazhov sasizazisa phakathi nesikhathi sokuphila kwakhe. Ngo-1943 Stalin umklomelo incwadi yakhe Tales Ural "Malachite Ibhokisi" waklonyeliswa.
Isithembiso yezinganekwane Ural
Tales akuzona ekuseni usebenza pavla Bazhova. Naphezu kweqiniso lokuthi intatheli, isikhulumi kanye Bazhov wamavukelambuso ibinesithakazelo temdzabu njalo, umqondo ukubhala yezinganekwane lalivela kuye ngesikhathi esisodwa.
I yezinganekwane lokuqala "iNkosikazi Intaba yethusi" futhi "imyachko othandekayo" yashicilelwa ngakho ngaphambi kwempi, ngo-1936. Njengoba Bazhov imisebenzi yaqala ukubonakala njalo cindezela. I nenjongo yezinganekwane ukuthi bakhulise intshisekelo ngiqaphele abantu isiRashiya, ukuqwashisa ngokwayo yisizwe esinamandla futhi liyohlala likhona, uyakwazi migilingwane kanti nokuphikiswa isitha.
Akulona umkhiqizo ukuqondana kwezinto Bazhov uvele ngaphambi ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, futhi eqhubeka eya kulo. Kule ndaba, PP Bazhov kwaba wemibono. Wakwazi landulele nomaye zihlasela futhi unesandla ekukwenzeni kutholakale le ngxabano phakathi ububi emhlabeni.
izithombe Mystical emisebenzini kwezincwadi PP Bazhov
Abantu abaningi bayazi ukuthi isebenza ebhaliwe Bazhov, kodwa hhayi wonke umuntu uyazi lapho umlobi waboleka izithombe imilingo zamaqhawe akhe. Yiqiniso, kuphela temdzabu wamnikela abantu nolwazi ngamandla angaphezu kwemvelo nezidalwa owasiza namaqhawe ezinhle futhi ajezise abantu ababi. Kukholakala ukuthi igama livela egameni Bazhov "bazhit", okuyinto lwesigodi of esise-Ural, ngokoqobo okusho "ebhula", "Ummemezeli".
Cishe, umlobi kwakungomunye umuntu owayeyisazi kahle zemfihlakalo, nje wanquma kabusha isithombe basezinganekwaneni somgijimi omkhulu, Ognevushka-Poskakushki, uyiNkosikazi Copper Mountain, elihlukanisa inselo Isiliva, kanye nabanye abaningi. Zonke lezi zinhlamvu imilingo zimelela amandla emvelo. Sinenkosi ingcebo engenakulinganiswa futhi ngiwavule kuphela kubantu ngezinhliziyo okumsulwa futhi evulekile, nimelana amabutho ububi futhi abadinga usizo nokusekelwa.
Bazhov usebenza izingane
Incazelo yezinye yezinganekwane sijule kakhulu, hhayi nje phezulu. Mangisho ukuthi akuzona zonke imisebenzi ziyobonakala Bazhov izingane. Ukuze indaba, sibhekiswe ngokuqondile asemasha, athathwa ngokuthi "Isiliva inselo", "Ognevushka-Poskakushku" futhi "Blue Snake". Bazhov usebenza izingane Ubhalwe ngolimi emfushane kakhulu futhi kufinyeleleke.
It is hhayi alalelwa kakhulu nakho abalingiswa, kodwa igxile incazelo zezimangaliso nezinhlamvu imilingo. Lapha Ukuganga Ognevushka-Poskakushka endaweni sarafan somlilo, e ngokuzumayo enye indaba ibonakala Isiliva inselo amabhithi namatshe ayigugu for girls nezintandane Kokovani umzingeli ezinhle. Futhi-ke, ukhona yini umuntu ongafuni ukuhlangana Blue inyoka ejika isondo futhi sikubonise iyona igolide?
Tales Bazhov nokusetshenziswa kwazo skazkoterapii
Bazhov imisebenzi elula kakhulu ukusebenzisa skazkoterapii, umsebenzi kabani main ezinganeni amagugu omuhle nezisusa, umuntu onesimilo, ukuthuthukisa nombono wabo yokudala emhlabeni kanye namakhono ezinhle bokusungula. izithombe ezicacile zamaqhawe, elula, ngobuqotho, abantu abazikhandlayo abantu, izinhlamvu kumnandi uzokwenza kwezwe wengane kuyinto enhle, enomusa, engavamile futhi othakazelisayo.
Into ebaluleke kakhulu Bazhov yezinganekwane - isimilo. Wakhe ingane kumele ufunde futhi ukhumbule, futhi omdala usizo kule kakhulu ezidingekayo. Emva indaba utshelwa, nezingane ngendlela efanayo friendly kudingeke baqhube ingxoxo mayelana nabalingiswa abasemqoka, ukuziphatha kanye yabo ukudalelwa. Izingane ziyajabula ukutshela ngebalingisi nezenzo zabo, ezikuthandayo, ukuveza imibono yabo mayelana izinhlamvu negative nokuziphatha kwabo. Ngakho, ingxoxo kuzosiza bahlanganise umphumela omuhle skazkoterapii ukugqugquzela ehlala njalo ukuvuselela ulwazi nezithombe ku engqondweni yomntwana.
Uhlu imisebenzi Bazhov:
"Umhlaba revolution othandekayo";
"Ermakova ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi";
"INkosikazi iCopper Intaba";
"Le ndawo efanayo";
"Lo mbhalo itshe";
"Hhayi Indwandwe ';
"Mayelana umgijimi Omkhulu";
"Ngo isela main";
"Izintaba ubudala zanikela";
"Esikhathini esidala okwami";
"I kwegatsha ethambile";
"Sakaza ugogo yensimbi";
Bazhov usebenza, uhlu okuyinto kuyinto efiselekayo sihlole abazali kusengaphambili, ngeke ekwakheni umqondo nezinga lezingane uzwela izinhlamvu ezinhle, ezifana ixhegu Kokovanya, Darenkov, futhi zengqondo ezingakhi, ukulahlwa abanye (umabhalane inganekwane "I uyiNkosikazi Intaba yethusi"). Bona ukugxilisa ingane nomuzwa ubuhle, ubulungisa nobuhle, umfundise ukuzwelana, ukusiza abanye futhi sokuthatha isinyathelo esiwujuqu. Isebenza Bazhov ukuthuthukisa amandla okukwazi ukwenza zokudala kwezingane kanye nomthelela ukubukeka amagugu abo nezimfanelo ezidingekayo ukuze ukuphila okujabulisayo futhi bayaphumelela.
Scene mayelana Day umama ezihlekisayo lomama
Ukuma we izici zendawo: izindlela nezibonelo
Beautiful yokwakheka isithombe Shishkin "Winter"
Genichesk - kuba eCrimea? City Genichesk. Genichesk kumephu
Puzzle ezithakazelisayo ingane iminyaka 5
Like inyoni ngobumba ikhuthaza ukuthuthukiswa yokukhuluma kwengane
Onesimo Khrushchev: ejwayelekile umehluko, izici okukhethwa kukho replanning
10 legends scary ezisemadolobheni ukuthi kungaba yiqiniso
Kanjani ukugubha uNyaka Omusha WamaShayina
Hemorrhoids amadoda: zokuvimbela, ukwelashwa, izimbangela imfundo, isithombe. Ikhambi for hemorrhoids ngoba amadoda
I-Psychology yamadoda othandweni: Ngizokusindisa intombazane yami kwabanye abantu
UVladimir Kiselev "Ntombazane futhi ptitselet": Isifinyezo by isahluko
Zitshala amagilebhisi ekwindla emva leaf kuwa
Duck incazelo shelduck Lesitshalo nesithombe
Kungani amashiya iwe: izizathu
Indlela yokupheka idada kuhhavini: iseluleko kwabendlukazi